Fb brute — Steemkr
Facebook ရဲ့ကိန်းဘရစ် Analytica ဒေတာအရှုပ်တော်ပုံ၏ပါတီအားမှာတော့တချို့က high-profile ကိုကုမ္ပဏီများအငြင်းပွားဖွယ်ရာများကြားတွင်လူမှုကွန်ယက်ကိုနှင့်ဆက်ဆံရေးဆိုင်းငံ့ထားလိုက်ပါတယ်။ Donald Trump သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရာ - - သူတို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မပါဘဲ 50 သန်းအသုံးပြုသူများထံမှစုဆောင်းဒေတာသုံးစွဲဖို့ယခုလအစောပိုင်းကက Facebook ကိုကင်းဘရစ် Analytica နေသုတေသီခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းထင်ရှားခဲ့သည်။
တန်ပြန်တဲ့လှိုင်း Facebook ရဲ့စတော့ရှယ်ယာထိုးကျလာခဲ့တာ, လာတော့သည်, နှင့်ဖက်ဒရယ်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်ယခုကုမ္ပဏီစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။ ဒီထိပ်တွင်ကုမ္ပဏီများ CEO ဖြစ်သူ Mark Zuckerberg ဟာရဲ့တောင်းပန်ပေမယ့် Facebook ကမှမိမိတို့တစတစဝေးကွာနှင့်သုံးစွဲသူများ '' privacy ကိုစောငျ့ရှောကျဖို့ကတိပြုထားပါသည်။ ဤတွင်ကင်းဘရစ် Analytica အရှုပ်တော်ပုံ၏ပါတီအားအတွက် Facebook ကနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ကြပြီကုမ္ပဏီများစာရင်းဖြစ်ပါတယ်။ Mozilla က ကြေညာချက်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်က, နာမည်ကျော် Firefox ကိုကို web browser ၏ထုတ်လုပ်သူက Facebook ပေါ်မှာက၎င်း၏ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုအပေါ် "ခေတ္တနားကိုနှိပ်" ကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့က Mark Zuckerberg ဟာ privacy settings တွေကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်သူတို့ကိုပိုပြီးအကာအကွယ်လုပ်ကတိထားတော်မူကြောင်းကိုအားပေးတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်"
ဟုအဆိုပါကုမ္ပဏီကဆိုသည်။ "Facebook ကအထူးတတိယပါတီ apps တွေအတွက်သူ့ရဲ့ default အ privacy settings တွေကိုအားပေးဖောက်သည် data တွေကိုမျှဝေဘယ်လိုအတွက်အားကောင်းအရေးယူကြာတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ပြန်လာထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်။ " Sonos အဖြစ်က Google, YouTube နဲ့ Twitter ကို - - သာတစ်ပါတ်အဘို့, တနင်္လာနေ့မှ စတင်. အဆိုပါစားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီက Facebook ကိုမသာကနေကြော်ငြာတွေဆွဲ, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့လက်အောက်ခံ Instagram ကိုခံခဲ့ရသည်ကြေညာခဲ့သည်။ "ကျနော်တို့က Facebook နှင့်၎င်း၏ပလက်ဖောင်းများ၏ခေါင်းပုံဖြတ် ပတ်သက်. မကြာသေးမီဗျာဒိတ်တော်များအားဖြင့်သက်ဆိုင်ရာနေကြတယ်" ဟု Sonos ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်ရေးသားခဲ့သည်။ "ဒီကိန်းဘရစ်ချ် Analytica အရှုပ်တော်ပုံ, ဆီလီကွန်တောင်ထဲကလာမယ့်များစွာကိုမကြာသေးမီခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ကဲ့သို့ Big Tech မှ၎င်း၏အကြီးမားဆုံးတာဝန်များကိုတဦးနှင့်အတူ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားချိန်ခွင်လျှာညှိဖို့လုံလောက်တဲ့လုပ်နေတယ်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းထုတ်: ။
သင့်ရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်" ထို့အပြင် Sonos ကတစ်ပါတ်မှုအတွက်၎င်း၏ Facebook နှင့် Instagram ကိုအကောင့်ပေါ်မှာမှောင်မိုက်သွားပါလိမ့်မယ် "ဟုတစ်ဦးကျန်းမာသန်စွမ်း, ပိုမိုစားသုံးသူ-friendly နည်းပညာဂေဟစနစ်တည်ဆောက်ရန်ရှာကြံသူတို့နှင့်အတူသွေးစည်းညီညွတ်မှု၌တည်၏။ " Pep Boys တနင်္လာနေ့တွင်, အလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုလက်လီအရောင်းဆိုင် Pep Boys ကကင်းဘရစ် Analytica အရှုပ်တော်ပုံ၏ရလဒ်အဖြစ် Facebook ပေါ်မှာက၎င်း၏
ကြော်ငြာရပ်တန်ခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။ "ကျနော်တို့က Facebook ကိုပတျဝနျးကငျြကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အချက်အလက်များထွက်ဖြစ်ကြပြီးမှန်ကန်သောလုပ်ရပ်များခေါ်ဆောင်သွားပြီသည်အထိပလက်ဖောင်းပေါ်မှာရှိသမျှမီဒီယာရပ်ဆိုင်းထားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ," Pep Boys အကြီးအကဲစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရာရှိဒန်ယဲလ် Porto Mohn က Reuters သို့ပြောကြားခဲ့သည်။
မှာအားလုံးပါလျှင် - Pep Boys က Facebook ပေါ်မှာကြော်ငြာပြန်လည်စတင်စေခြင်းငှါ, သည့်အခါအပေါ်တစ်ဦးအချိန်ဇယားကိုမပေးခဲ့ပါဘူး။ SpaceX နှင့်တက်စလာ သူဟာတွစ်တာစိန်ခေါ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်လူမှုရေးကွန်ယက်မှသည်သူ၏ကုမ္ပဏီနှစ်ခုအဘို့အစာမကျြနှာကိုဖယ်ရှားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြသောအခါ Elon Musk က Facebook အကြောင်းကိုသည်သူ၏ခံစားချက်များကိုတော်တော်လေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Musk အတိအလင်းသူအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကင်းဘရစ် Analytica အငြင်းပွားဖွယ်ရာ၏ SpaceX နှင့် Tesla ရဲ့ Facebook ကိုစာမကျြနှာကိုဖျက်လိုက်ပါကပြောသည်မရှိသေးပေနေစဉ်, စိန်ခေါ်အဆိုပါအရှုပ်တော်ပုံ၏ပါတီအားအတွက် Facebook ကိုဖျက်ပစ်ရန် WhatsApp ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူဘရိုင်ယန် Acton အားဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုမှထ။ (Facebook က 2014 ခုနှစ်အတွက် $ 19 ဘီလီယံများအတွက် WhatsApp ကိုဝယ်ယူ) Acton ရဲ့ tweet ပြန်ကြားခြင်းတစ်ဦးက Twitter အသုံးပြုသူ SpaxeX ရဲ့ Facebook ကိုပရိုဖိုင်းကိုဖျက်ပစ်ရန်စိန်ခေါ်အခါ, Musk ငါတဦးတည်းရှိ၏နားလည်သဘောပေါက်ကြဘူး "ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ လုပ်မည်။" သူတက်စလာ၏စာမျက်နှာများအတွက်အလားတူလုပ်ဆောင်မယ်လို့ရှိမရှိမေးတဲ့အခါ, Musk ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် ", တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေဆွံ့သောသူကိုကြည့်။ " Musk သူတို့ကပထမဦးဆုံးဌာန၌ကြော်ငြာဘယ်တော့မှဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိအကုမ္ပဏီများသည် Facebook ပေါ်မှာကြော်ငြာဆိုင်းငံ့ထားရန်မခံခဲ့ရသူကဆက်ပြောသည်။ "ငါ့ကုမ္ပဏီများအဘယ်သူမျှမကြော်ငြာကိုဝယ်သို့မဟုတ်အတုထောက်ခံချက်မှကျော်ကြားသောလူမျိုးသည်ပေးဆောင်" Musk တစ် tweet ကပြောသည်။ "ကုန်ပစ္စည်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တန်ရာအပေါ်အသက်ရှင်တော်မူသည်သို့မဟုတ်သေသွားတယ်။ "
Commerzbank Frankfurt အခြေစိုက်ဂျာမဏီရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးဘဏ်, ကနောက်ထပ်အသိပေးစာသည်အထိ Facebook ပေါ်မှာကြော်ငြာမှာမဟုတ်ဘူးဟုဆိုသည်။ "ကျနော်တို့က Facebook ပေါ်မှာငါတို့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခေတ္တရပ်ဆိုင်းခြင်းသည်နေကြသည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လုံခြုံမှုနှင့်ဒေတာလုံခြုံရေးကျွန်တော်တို့ကိုရန်အလွန်အရေးကြီးလှသည်, "အမှတ်တံဆိပ်မဟာဗျူဟာသူ Uwe Hellmann ၏ Commerzbank ခေါင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနအဆိုအရဂျာမန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသတင်းစာ Handelsblatt သို့ပြောသည်။ Playboy အဆိုပါအထင်ကရမဂ္ဂဇင်းကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖန်တီးမှုအရာရှိ Cooper က Hefner ကနေမတ်လ 27 ရက်နေ့ကတစ်ဦး tweet အတွက်၎င်း၏ Facebook စာမျက်နှာကိုမဖျက်ပစ်ခဲ့ပါသည်ဟုပြောသည်။ "Facebook ရဲ့ content တွေကိုလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာမူဝါဒများကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးများကိုဆန့်ကျင်ကိုဆက်လက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွင်လိင်ဖိနှိပ်ဖြစ်ဆက်လက်သောပလက်ဖောင်း, ကျွန်ုပ်တို့၏စကားသံကိုကျွမ်းကျင်စွာဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်, "Hefner အဆိုပါကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ "- အရာထက်ပို 25 သန်း Playboy ပရိတ်သတ်များများမှာ - အခမဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲအတွက်မကြာသေးမီရောက်စွက်ဖက်ခြင်း၏သင်ယူနောက်ထပ်ကျနော်တို့သူတို့အသုံးပြုသူများသည် '' ဒေတာများကိုကိုင်တွယ်မည်သို့ရှိအခြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုပြသသည်။ ကျွန်တော်ပလက်ဖောင်းချန်ထားရမည်ကိုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအောင်"
Facebook rae kein bharait Analytica day tar aashotetawpone eat parteaarr mhartottahkyahoetk high-profile ko kumpanemyarr aangyinnpwarrhpwalrar myarr kyarrtwin luumhu kwanyaat ko nhaint saatsanrayy sinenganhtarr litepartaal . Donald Trump sammatarwaykoutpwal mellswalhcaeeronerayy aapaw aalotelotehkaerar - - suuthoetrae sabhawtuunyehkyetmaparbhell 50 saann aasonepyusuu myarrhtanmha hcusaungg day tar sonehcwal hphoet yahkul aahcawpinekak Facebook ko kainn bharait Analytica nay sutayse hkwin pyuhkae kyaungg htainsharr hkaesai . taanpyan taelhaine Facebook rae hc tot shalyar htoe kya larhkaetar, lar totsai, nhang hpaatdaraal koneswalrayy kawmashin yahku kumpane hconehcamhcaitsayy naypartaal . de htiut twinkumpanemyarr CEO hpyitsuu Mark Zuckerberg har rae taunggpaanpaymaae Facebook k mha mimithoet tahcatahc wayykwar nhaintsonehcwalsuumyarr '' privacy ko hcawngya shaw kya hphoet katipyu htarrparsai . itwin kainn bharait Analytica aashotetawpone eat parteaarraatwat Facebook k nae aasaataaswal hpyat kya pye kumpanemyarr hcarrainn hpyitpartaal . Mozilla k kyaynyarhkyet htellmhar pyeehkaetae setainnpaatk, narmaikyaw Firefox koko web browser eat htotelotesuuk Facebook pawmhar k ၎inneat kyawngyaar lhuutsharrmhuaapaw " hkaytt narr ko nhaiut" k pyawwpartaal . " kyanawthoetk Mark Zuckerberg har privacy settings twayko toetaat kaunggmwanaaung suuthoetko popyee aakaraakwal lote k ti htarr taw muu kyaunggko aarrpayy titetwann naykyapartaal" hu aasopar kumpanek sosai . "Facebook k aahtuu tatiyaparte apps twayaatwatshurae defaultaprivacy settings twayko aarrpayyhpoutsai data twayko myahaway bhaallo aatwat aarrkaungg aarayyyuu kyaar taeaahkar mhar kyanawthoet pyanlar htaeet swin hcain hcarr rapar lain maal . " Sonos aahpyitk Google, YouTube nae Twitter ko - - sar tait paratabhhoet, tanainlarnaemha hcatain. aasopar hcarrsonesuu aelaathtarawnaitkumpanek Facebook ko m sar k nay kyawngyaartway swal, darpaymaae shuraelaataouthkan Instagram ko hkanhkaerasai kyay nyar hkaesai . " kyanawthoetk Facebook nhaint ၎inneat palaathpaungg myarreat hkaungg ponehpyat paatsaat. makyaarsayyme byaardate tawmyarr aarr hpyint saatsinerar naykyataal" hu Sonos bhalotg phoetit twin rayysarrhkaesai . " de kein bharaithkya Analytica aashotetawpone, selekwan taung htellk lar m ae myarrhcwarko makyaarsayyme hkaunggkyee pinetwinkaeshoet Big Tech mha ၎inneat aakyeemarrsone tarwaanmyarrko t u nhaint aatuu ၎inneat kopine aakyoehceepwarr hkyanehkwinshar nyhai hphoet lonelouttae lotenaytaal shimashinhaint paatsaat. mayyhkwannhtote: . saintrae privacy ko karkwal" hthoetaapyin Sonos k tait parat mhuaatwat၎inneat Facebook nhaint Instagram ko aakaung pawmhar mhaawin mite swarr par lainmaal " hu tait u kyannmar saan hcwm, pomo hcarrsonesuu-friendly naeepanyar gayhahcanait taisoutraan sharkyaan suuthoet nhang aatuu swayhcaee nyenywatmhu tai eat . " Pep Boys tanainlarnae twin, aaloaalyawwat aahcateaapinemyarr nhang waansaungmhu laatleaaraunggsine Pep Boys k kainn bharait Analytica aashotetawpone eatraladaahpyit Facebook pawmhar k ၎inneat kyawngyaar rauttaan hkanhkaerasai husosai . " kyanawthoetk Facebook ko patyawanya k ngyaya kihchcarautmyarrnhaint paatsaat. hcoerain puupaan hpyitkyaungg nhang aahkyetaalaatmyarr htwat hpyitkya pyee mhaankaansaw loterautmyarr hkawsaungswarr pye saiaahti palaathpaunggpaw mhar shisamyaha medeyar rautsinehtarr raan sonehpyat lite kya pye," Pep Boys aakyeeaakell hcyaayykwat sharhpwayrayy aararshi daan yelll Porto Mohn k Reuters shoet pyawwkyarrhkaesai . mhar aarrlone parshin - Pep Boys k Facebook pawmhar kyawngyaar pyanlaihcatain hcay hkyinn nghaar, saeet aahkar aapaw tait u aahkyanejayarr ko m payy hkaeparbhuu . SpaceX nhainttaathcalar suuhar twittar hceinhkawmhu eat taithcatetaitdays aahpyit luumhurayy kwanyaat mha saisuueat kumpane nhaithkuabhhoetahcar m kyaya nhar ko hpaalsharrhphoet sabhawtuunyehkae kyasawaahkar Elon Musk k Facebook aakyaunggko saisuueat hkanhcarrhkyetmyarrko tawtawlayy shinnshinnlainnlainn hpaansainn tawmuueat . Musk aatiaalainn suuabhaal kyount sosaw kainn bharait Analytica aangyinnpwarrhpwalrareat SpaceX nhaint Tesla rae Facebook ko hcar m kyaya nhar ko hpyet litepar kapyawwsai mashisayypay nayhcain, hceinhkaw aasopar aashotetawpone eat parteaarraatwat Facebook ko hpyet paitraan WhatsApp ko puutwal taihtaungsuu bh rine yaan Acton aarr hpyint hkawsomhu mha ht . (Facebook k 2014 hkunhaitaatwat $ 19 bheleyanmyarraatwat WhatsApp ko waalyuu) Acton rae tweet pyankyarrhkyinn tait uk Twitter aasonepyusuu SpaxeX rae Facebook ko paro hpine ko hpyet pait raan hceinhkaw aahkar, Musk ngar t u taee shieat narrlai sabhawpout kyabhuu " pyanlai hpyay kyarrhkaesai . lotemai ." suu taathcalar eat hcarmyetnharmyarr aatwat aalarrtuu lotesaungmaallhoet shimashi mayy taeaahkar, Musk hkyet nhaintaadhipparal ", tonepyan hkaesai . bharpellhpyithpyit hkyay swan sawsuu ko kyany . " Musk suuthoet k pahtam u sone htarn kyawngyaar bhaaltotmha bharhpyitlhoetlellsotot mimiakumpanemyarrsai Facebook pawmhar kyawngyaar sinenganhtarr raan m hkanhkaerasuu k saatpyawwsai . " ngar kumpanemyarrabhaalsuu myaha m kyawngyaar ko waal shoetmahote aatu htouthkanhkyet mha kyawkyarrsaw luumyoesai payysaung" Musk tait tweet kapyawwsai . " konepahchcaee ၎inneat kopine taanrar aapaw aasaat shintawmuusai shoetmahote sayswarrtaal . " Commerzbank Frankfurt aahkyayhcite gyaarmane rae dutiyaaakyeesone bhan, k nouthtaut aasipayyhcarsaiaahti Facebook pawmhar kyawngyaar mhar mahotebhuu husosai . " kyanawthoetk Facebook pawmhar ngarthoet mellswalhcaeeronerayy hkaytt rautsinehkyinn sai naykyasai . kone aamhaattansiut lonehkyuanmhu nhaint day tar lonehkyuanrayy kyawantawthoet ko raan aalwan aarayykyee lhasai, " aamhaattansiut maharbyauuharsuu Uwe Hellmann eat Commerzbank hkaunggko ritetar satainnhtarn aasoaar gyaarmaan hceepwarrrayylotengaannsatainnhcar Handelsblatt shoetpyawwsai . Playboy aasopar aahtainkar maggajainn k karkwalrayy u hcee hkyaote hpaanteemhuaararshi Cooper k Hefner k naymaatl 27 raatnaek tait u tweet aatwat၎inneat Facebook hcarmyetnhar ko m hpyet pait hkaeparsai hupyawwsai . "Facebook rae content twayko lamnywhaan hkyetmyarr nhaint kaw po rate sinerar muuwardamyarr kyawantawthoetrae taanhpoemyarr ko s n kyin ko saatlaat . kyawantawthoetrae aamyin twin liin hpinhaiut hpyit saatlaat saw palaathpaungg, kyawanotethoeteat hcakarrsan ko kyawmkyinhcwar hphoet kyaoehcarrhkae partaal, "Hefner aasopar kyaynyarhkyet twin hpawpyahtarrsai . "-arar htaatpo 25 saann Playboy paratesaatmyarrmyarrmhar - aahkamae aamayrikaanpyihtaunghcu rwaykoutpwalaatwat makyaarsayyme rout hcwat hpaat hkyinn eat sainyuu nouthtaut kyanawthoet suuthoet aasonepyusuumyarrsai '' day tar myarrko kinetwalmai shoet shi aahkyarr hcoerain puupaan mhu pya s sai . kyawantaw palaathpaungg hkyaan htarr ramai ko k shinnshinnlainnlainn aaung"